WhatsApp အော့ဖ်လိုင်းကကျွန်တော်တို့ကို WhatsApp အသိပေးချက်များကိုရပ်တန့်ရန်ခွင့်ပြု | Androidsis
Android အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးချပရိုဂရမ်များ - ယနေ့ WhatsApp offline
တစ်ဖန်ကြိုဆိုပါတယ် Android အတွက်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ application များ, သင့်ကိရိယာအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးဝင်ဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်မည့်သီးသန့်နေရာတစ်ခု အန်းဒရွိုက် operating system ကို.
ဒီအရစ်ကျအသစ်အတွက် ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်အသုံးဝင်သောလျှောက်လွှာကိုတင်ပြချင်ပါတယ် နှင့်၎င်း၏ကြီးမားတဲ့ရိုးရှင်းများအတွက်ထွန်းလင်း။ လျှောက်လွှာကိုခေါ်တယ် WhatsApp ကိုအော့ဖ်လိုင်း ၎င်းတွင်လုံးဝအခမဲ့ရရှိနိုင်သည် Play Store ကို de Google.
1 WhatsApp အော့ဖ်လိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုကမ်းလှမ်းသလဲ။
2 WhatsApp သည်အော့ဖ်လိုင်းတွင်အတိအကျဘာလုပ်သနည်း။
WhatsApp ကိုအော့ဖ်လိုင်း အသိပေးချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးထားပါတယ် Whatsapp ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်အချိန်တွင်သို့မဟုတ်၎င်းကို ထပ်မံ၍ restart လုပ်ရန်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါကအဖြစ်အလွန်အသုံးဝင်သည် ငါတို့ disable လုပ်စရာမလိုဘူး ကျွန်ုပ်တို့၏ Wifi ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဒေတာချိတ်ဆက်မှုတို့သည်အချိန်နှင့်အမျှငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်အနားယူခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်သတိပေးချက်များမရှိဘဲငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေရန် Whatsapp.
သုံးစွဲဖို့ WhatsApp ကိုအော့ဖ်လိုင်း သင်သည်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အမျိုးအစားကိုမှပေးရန်မလိုအပ်ပါ WhatsApp ကိုအော့ဖ်လိုင်းကရုံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် task ကို Killer လူကြိုက်များသောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်း၏နောက်ခံကွပ်ကဲခြင်းကိုသတ်ပစ်ခြင်းနှင့်ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်အပလီကေးရှင်းကိုသက်ဝင်သမျှကာလပတ်လုံး၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လုံးဝပြတ်တောက်သွားသည်။
ထိုနည်းတူစွာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ရယူလိုသည့်အချိန်တွင်လည်းဖြစ်သည် Whatsappခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ရပ်တန့်ထားသော application ကိုနှိုးခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုအတွက်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
ငါတို့အချင်းချင်းပိုကောင်းအောင်နားလည်ဖို့ဆိုရင်နောက်ခံအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုသုံးတဲ့ရိုးရိုး switch တစ်ခုပါ Whatsapp သင့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုသတ်သို့မဟုတ် restore ရန်။
၀ န်ဆောင်မှုကိုပြီးပြည့်စုံစွာဖန်တီးရန်လျှောက်ထားသောလျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကာလကိုရရှိရန်အသုံးဝင်သည်။ WhatsApp ကိုအော့ဖ်လိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုကိုအခြားအပလီကေးရှင်းများ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သောဆက်သွယ်မှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲ။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတစ် ဦး အပေါ်ကစမ်းသပ်ပြီးပါပြီ LG L3 အတွက်ပေမယ့်perfectlyုံအလုပ်လုပ် Galaxy Tab7မော်ဒယ် p-1000 ချက်ပြုတ် rom နှင့်အတူ အန်းဒရွိုက် 4.3 ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထံထည့်သွင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်ပြေးသောအခါဘာမျှဖြစ်မလာပါက၎င်းသည်ချက်ပြုတ်ထားသော rom ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - အံ့သြစရာကောင်းသည့် Android Apps: ယနေ့ PicPac ကင်မရာ, Amazing Android Apps - ဒီနေ့ Smart Call Acept
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Whatsapp » Android အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးချပရိုဂရမ်များ - ယနေ့ WhatsApp offline
ဂရိတ် !!! 😀
Maileny Ortega မှစာပြန်ပါ
မာရီယာအယ်လီနာ Moran Merchan ဟုသူကပြောသည်
Maria Elena Moran Merchan အားပြန်ကြားချက်
အဲဒါကိုအနက်ရောင်စာရင်းထဲကနေဖယ်ထုတ်ပြီးအမြဲတမ်းပိတ်ထားလိုက်တာ။ leave ငါကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါဖွင့်လိုက်မယ်။ ဒါဆိုငါနေရာမရှိဘူး။
ပို့စ်တွင်စာသားကိုယ်နှိုက်၏အဆုံး၌ download link ပါရှိပါသည်။
Windows Mail ဖြင့်ပေးပို့သည်
ပေးပို့ခဲ့သည်: တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 13, 2013 0:09 pm တွင်
မှတ်ချက်အသစ်တစ်ခုကို androidsis တွင်တင်ထားသည်
Mike () ည့်သည်):
ညနေ ၆း၉ နာရီ၊ စနေနေ့အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်
အီးမေးလိပ်စာ: mjdre@hotmail.com | အိုင်ပီလိပ်စာ: 64.32.101.70
ဤအီးမေးလ်ကို "Delete", "Approve" သို့မဟုတ် "Spam" နှင့်သို့မဟုတ် Disqus moderation panel မှအလယ်အလတ်ဖြင့်တုံ့ပြန်ပါ။
androidsis နှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်းအသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်သင် sign up လုပ်သောကြောင့်သင်ဤမက်ဆေ့ခ်ျကိုသင်လက်ခံရရှိသည်။
androidsis ရှိလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သောအီးမေးလ်များမှဤစာကို“ unsubscribe” ဖြင့်ပြန်ကြားခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏သတိပေးချက်ချိန်ညှိချက်များကိုညှိခြင်းဖြင့်ထိုအီးမေးလ်များကိုပို့သည့်နှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Google သည် Android အတွက် Hangouts တွင် Status Indicator ကိုထည့်သွင်းထားသည်
မည်သည့် Android terminal တွင် Quick Settings ကိုဖွင့်ရမည်နည်း